သာလွန်ဇောင်းထက်| November 26, 2012 | Hits:1
58 Responses LeaveaReply Cancel reply
[email protected] November 26, 2012 - 12:03 pm ၀န်ကြီးမဖြစ်တိုင်းနဲ့ မနာလိုမရှိကြနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြ ၀င်မရှုပ်ကြ နဲ့ ၊မဲမထည့်ဘဲနေလိုက်မယ် အားအားယားယား ဘယ်သူထောက်ပံ့နေလဲ ဘယ်က၀င်ငွေရနေ လဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ပါ၊
Reply kyawmoe November 26, 2012 - 8:43 pm ခင်ဗျားးတို့က မယုံဘူးလား ကချင်တောင့်ခံနေတာသူ့ ကိုပေး
Reply THTY November 26, 2012 - 12:08 pm I totally agree with you U Aung Min.
Reply Tar Tee November 26, 2012 - 2:55 pm ဘာတွေမှန်လို့ထောက်ခံနေပါသလဲ?
Reply kyi thar November 26, 2012 - 12:17 pm “၀န်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ စကားပြောရင်တော့ သံတမန်ဆန်ဆန် ပြောတတ်ရမယ်။ တရုတ်ကို ကြောက်နေရပါတယ် ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာက နိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ၀န်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ မပြောသင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ ပြောချင်တာက ဦးဆောင်တဲ့သူဆိုတာ ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ရတာလေ။ ၀န်ကြီးကို ကြောက်ရင်၊ သတ္တိမကောင်းရင် မလုပ်နဲ့၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာလေးမှာပဲ အေးအေးလူလူ အနားပြန်ယူပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်”
Reply kyaw swar November 26, 2012 - 12:29 pm Irrawaddy is the life-blood of myanmar
Replyုကိုကိုစိုး November 26, 2012 - 12:31 pm သူပြောတာမှန်တယ်၊အရင်အစိုးကပေးခဲ့တဲ့အမွေလေ၊ လူကြီးမင်းတို့ကတရုပ်ဘက်ကနာနေတာလား၊
Reply ကျော် November 26, 2012 - 9:54 pm နေပါဦး ။ အရင်အစိုးရဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ ။ သူတို့ပဲ မဟုတ်လား ။
Reply အော်ကလား November 27, 2012 - 3:20 am အရင်အစိုးရဘောဘီဝတ်လယ်လေ။ခုအစိုးရကလုံခီဝတ်လယ်လေ။အရင်နဲ့
Reply ဖိုးသိ November 26, 2012 - 1:08 pm ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ကျပြန်ပြီ။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကြောင့် တိုင်းပြည်မပျက်ပါ။ မဆလပျက်သွားတာပါ။ ဗကပချုပ်ငြိမ်းတာက သခင်သန်းထွန်းကို(၇)နှစ်အယုံသွင်းပြီး ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်မှ လုပ်ကြံခဲ့လို့ပါ။ စစ်တပ်လက်ချက်ပါ။
Reply oomoe November 26, 2012 - 1:56 pm ၀င်ကြီး (အရာရာကို ၀င် ရောက်ပြီး ကြီးကျယ်သောစကားပြေားကြားသူ)
Reply ပြည်သူ November 26, 2012 - 2:12 pm ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းမည်ဆိုပါက လျှော်ကြေး ဒေါ်လာဘီလီယံချီ၍ ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျေးဇူးရှိပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံက အတော်စိတ်ဆိုးနေပြီး မြန်မားအစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ကြောက်နေရကြောင်း ဦးအောင်မင်းက သံဃာတော်များ အပါအ၀င် ဒေသခံများကို ပြောဆိုသွားသည်။
Reply pps12345 November 26, 2012 - 2:21 pm ကိုအောင်မင်းရေ ခင်ဗျား ဘာတွေပြောနေတာလဲဗျာ။ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု လက်ထက်က မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ကိုကျင့်သုံးနေပေမယ့် တရုတ်ပြည်က ဗကပ ကို ထောက်ပံ့ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ လက်ထက် အစပိုင်းတုံးက လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ သောက်တလွဲ လုပ်နေတာ လည်း တရုတ်က လက်ပိုက်ကြည့် နေခဲ့တာပဲ၊ တရုတ်–ဗမာ အရေးအခင်း လုပ်ပြီး အနောက်တိုင်းရဲ့ လောင်းရိပ်အောက် ကို ခြေဆုန်ပစ် ဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတွေ ဆိုရှယ်လစ် စနစ် ဆိုပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တည်ဆောက်တာတွေကို တရုတ်ပြည်က တော်တော် သည်းခံခဲ့တာပဲလေ။ နောက်ပိုင်း အဖိနိုပ်ခံ ဗကပ တွေ လက်နက်သွားတောင်းတော့လည်း လက်နက် အစုတ် တွေနှင့် နည်းပြ အရာရှိတွေ လောက်ပဲပေးတာလေ။ ဗီယက်နမ်မှာ တရုတ် ဗော်လန်တီယာ ၂သန်းလောက် သေသွားပေမယ့် ဗမာပြည် ကို ဘယ်သူတွေ လွှတ်ခဲ့လို့လဲ။ နဝတ လက်ထက် ရောက်တော့လည်း နဝတ အစိုးရ အလိုကျ ဗကပ ကို ဖျက်ပေးခဲ့တာလည်း တရုတ်ပဲလေ။ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းလို သောက်တလွဲတွေ လုပ်ထားလို့ အနောက်တိုင်းက တပ်တွေ လာမှာစိုးလို့ ဗမာပြည်မှာ အစိုးရ အသက်ရှုချောင်အောင် ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ စီးပွားရေး ဝင်လုပ်တာပါ။ ဒါတောင် နအဖ က တရုတ်ဆီက ပိုက်ဆံကြိုယူပြီး နေပြည်တော်စီမံကိန်းဆိုတဲ့ တလွဲ စီမံကိန်းကို လုပ်လိုက်သေးတယ်။ တရုတ်တွေကို ပရောဂျက်ပေးတယ် ဆိုပြီး ကိုယ်ပွဲစား ကို မိုနိုပိုလီလုပ်ခိုင်းပြီး တရုတ်နာမည်နဲ့ ပွဲခတွေ ဘုန်းသွားတာတွေ တရုတ်ပြည်ကသိပေမယ့်လည်း ဘာမှ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ယခုစီမံကိန်း ထက်ဆိုးတဲ့ စီမံကိန်းတွေတောင် တရုတ်တွေ အရှုံးခံနိုင်သေးတာ။ အမှန်တကယ်တော့ မြန်မာက တရုတ်ကို ကြောက်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရ က မြန်မာပြည်က တလွဲ အစိုးရ ကို ကြောက်နေရတာကွ။ တိုင်းပြည်ကို အကြောက်တရားနှင့် ခြောက်တဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပြီ။ မြန်မာပြည်က အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံပါ။ ဆန္ဒပြသူများ ခင်ဗျား လူထု အခွင့်အရေး အတွက် ဆက်သာဆက်လုပ် ပါ။
Reply pnwara November 26, 2012 - 2:45 pm တရုပ်ကျေးဇူး တိုင်းပြည်အပေါ်မှာသော်လည်းကောင်း-လူထု အပေါ်မှာသော်လည်းကောင်း ဘာတခုမှ မရှိပါ။ အာဏာရှင်တွေ အပေါ်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂ မှာ ဗီတို အာဏာနဲ့ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ အရာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလဲ အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါ- အာဏာရှင်တွေက တိုင်းပြည်ပိုင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ပေးလို့ဗီတို သုံးပြီး အာဏာရှင်တွေကို ကာကွယ်ပေးတာပါ- အပေးအယူရှိလို့အကာအကွယ်ပေးတာပါ။ တမင်းသက်သက် အာဏာရှင်တွေကို အလကားနေရင်း လူမုန်းခံပြီး ဗီတို မသုံးပါ။ ဦးအောင်မင်း- ရှက်တတ်လျှင် တရုပ်ကို ကြောက်ရတယ်လို့ ပြောမည့်အစား-ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်လိုက်တာက ဂုဏ်သိက္ခာရှိပါဦးမယ်။
Reply မင်းမျိုးနိုင် November 28, 2012 - 5:40 am ပအို့တွေဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အာဏာပိုင်တွေကိုအယုံအကြည်မရှိလို့ကိုယ့်တရားကိုယ်
Reply Tar Tee November 26, 2012 - 2:51 pm အရည်အချင်းကစကားပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဝန်ကြီးဖြစ်လာတာလဲ?
Reply San Shwe November 26, 2012 - 3:01 pm သခင်သန်းထွန်း was dead in 1968, but BCP totally destructed in 1990.
Reply မင်းမျိုးနိုင် November 28, 2012 - 5:16 am Poor moron. They do not know they are on the sinking boat.
Reply Dah Eh November 26, 2012 - 3:29 pm တကယ်ကြောက်နေရလို့..လွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်မိတာ။ တောသူမလေး..တောကလူတွေနဲ့စကားပြောနေရလုိ့..သံတမန်ဆန်ဆန်..ပြောရင်နားမလည်မှာစိုးလို့…အရပ်သားဆန်ဆန်…ပြောလိုက်တော့..အရှိကို..အရှိအတိုင်း..ပေါ်ရတာပေါ့..။
Reply kyaw kyaw November 26, 2012 - 3:31 pm တပ်ကလာတဲ့ ကောင်တွေက..လူသတ်ဖို့ နဲ့ လူမိုက်စကားအမြဲတမ်းပြောတဲ့ ကောင်တွေ..အခုတော့ ကြောက်ရမယ့် သူပေါ်လာပြီ။ခင်ဗျားတို့ တကယ်ကြောက်ရမှာက..တယုတ်မပာုတ်ဘူး။အ၀ီစိငရဲ ကိုကြောက်ရမှာ..စားတော့ တစ်မိသားစုလုံး၊ခံတော့ တစ်ယောက်တည်း။ဘာတဲ့ ..လယ်တီဆရာတော်ကျောင်းမှာ..ထီးတော်တင်လှုမလို့ တဲ့ ၊မှတ်ထားပါ..လှုတယ်ဆိုတာ..အလှုခံတဲ့ သူ နဲ့ အလှုပေးတဲ့ သူ နှစ်ဦးလုံးစင်ကြယ်မှ..အလှုမြောက်တာ..အလှုခံတဲ့ သူကစင်ကြယ်ပြီးသားပါ..အလှုပေးတဲ့ ခင်ဗျားက ပြည်သူ့ ငွေတွေ ခိုးပြီးလှုတော့ …သာသနာတောင်ညစ်နွမ်းပါတယ်ဗျာ…ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ သာသနာကိုတောင် ခင်ဗျားတို့ အာဏာရှုးတစ်သိုက် ဖျက်စီးခဲ့ ကြပြီးပြီဘဲ…
Reply Danabala November 26, 2012 - 3:41 pm ဦးအောင်သိန်းလင်း ကလည်း တရုတ်ကို အားကိုးတကြီးရှိနေတဲ့ အခြေအနေမျုိးကို အင်တာဗျူး မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Reply kyaw kyaw November 26, 2012 - 3:43 pm သြော်…အခုမှဘဲငါတို့ တိုင်းပြည်ကခေါင်းဆောင်တွေ..လက်အုပ်ချီပြီးရှိခိုးနေတာ..ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမပာုတ်ဘဲ..တယုတ် ကြီးမှန်းသိတော့ တယ်၊
ReplyှSai November 26, 2012 - 3:54 pm ဦးအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးသည့်အမျိုးသမီးက ရဲရဲတောက်မည့်အမျိုးသမီးအဖြစ်ချီးကျူးထိုက်ပါသည်။သူမဦးအောင်မင်းကိုပြောတာက-တရုပ်ကိုကျမတို့ကြောက်စရာမလိုဘူး၊ကိုယ့်အားကိုကိုးမှာပေါ့၊တရုပ်ကျေးဇူးကိုဆပ်လို့ပဲခူးရိုးမကြီးတခုလုံးလဲပြောင်ပြီတဲ့။အမျိုးသမီးနာမည်ကိုမသိပါ၊ဒေသခံရွာသူဖြစ်ပါသည်။
Replyုkolattkklphado November 30, 2012 - 10:26 pm ဟေ့ကောင်တိုင်းပြည်အတွက်ဦးအောင်မင်းပြောတာ
Reply စိုင်းကျော် November 26, 2012 - 4:10 pm ဒါဆိုလဲ..ဒေသခံတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တမျိုးမျိုးစီစဉ်ပေးပါလား…ဒေါ်လာဘီလျံချီမကုန်ပါဘူး
Reply myanpyithar November 26, 2012 - 4:23 pm အစိုးရ ရဲ့တာဝန်ရှိဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်တွေ ကအရေးကြီးပါတယ် အရင်အစိုးရအနေနဲ့တ
Reply ရာဇာ November 26, 2012 - 4:46 pm ဥိးအောင်မင်း ကို မြန်မာထင်နေတာ…အခုမှဘဲ တရုတ်ဆိုတာ သိရတော့တယ်….မျက်နှာကျ က တရုတ်နဲ့ တူတယ်လို့တော့ အစက ထင်ထားတာ…အခုတော့ သေချာသွားပြီ….သွေးပုချိ…နော်
Reply Myanmar Pyithar November 26, 2012 - 5:40 pm The problem ith Burma is everyone is very good at boasting how brave they are.
Reply swe htwe November 27, 2012 - 12:14 am That’s right.
Reply မောင်မောင်သူရ November 26, 2012 - 5:45 pm စစ်တပ်ကနေတက်လာတဲ့(၀ံ)ဲကြီးဆိုတော့ လေသံကိုက လူကြီးလေသံမျိုးမဟုတ်ဘူး
အရာရာကိုအပေါ်စီးကနေလိုချင်တဲ့ စစ်တန်းလျားလေသံနဲ့ – ဦးအောင်မင်းကြီး နေရာမှန် စစ်တန်းလျားကိုပြန် –
Reply tin tun November 26, 2012 - 6:00 pm ၀န်ကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ.ကြောက်တယ်ဆိုတဲ.စကားဟာတိုင်ပြည်နှင်.လူမျိုးကိုစော်ကား
Reply့ hi November 26, 2012 - 6:34 pm တကယ်တော့..ဦးအောင်မင်းမပြောခင်တော်မှာ..တိုင်းပြည်ကသိနေပြီး..စစ်အစိုးရက.. တယုတ်ကိုကြောက်နေရတယ်ဆိုတယ်။ ခုပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီးဆိုတော့.. အစိုးရလည်း..ပွင့်လင်းလာတာပေါ့ဟာ..။ ဦးအောင်မင်းဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့..သူ့ကို အပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူး။ စစ်အစိုးရကကြောက်တယ်ဆိုတာဟာ.. အစိုးရနဲ့ဆိုင်တယ် ပြည်သူနဲ့တော့..လာပြီး.. အထိမခံဘူး။ ဒါပဲ.. ။ လျှော်လိုက်ရတယ်ဆိုတာ.. အဲဒီပိုက်ဆံတွေက. ဘယ်သူကယူထားတာလဲ..။ ယူထားတာကိုခု..ဘယ်ရောက်ပြီးလဲ။ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ..။ ပြည်သူလက်ထဲမှာ..တပြားမှမရောက်သလို.. တယုတ်နဲ့ သဘောတူညီမှုတွေယူ ထားတယ်ဆိုတာ..ပြည်သူတွေနဲ့..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိခဲ့လို့လား။
ReplyaNovember 26, 2012 - 9:03 pm အံ့သြစရာပဲ၊သူတို့ကြောက်တာနဲ့ပြည်သူကပါလိုက်ကြောက်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။အကောင်းအဆိုးမခွဲနိုင်လောက်အောင်အမှောင်ဖုံးနေပြီ။
Reply Thar Thar November 26, 2012 - 10:37 pm Maung Minn said We need to be afraid of China??? why president thein sein said we listen the voice of myanmar people, that’s why we stop myitsone damm. Now U aung minn said we are afraid of china. How do we trust this government? Let’s see again Daw Aung Sann Su Kyi what she will say ??????
Reply Pan Pwint November 26, 2012 - 10:45 pm ပြည်ပအားကိုး ပုစိန်ရိုး လို့ ပြောရမယ့် အစား တရုတ်အားကိုး မယ်လိုး လို့ ပြောတာ ပိုမှန်မယ်။ ဘာကြောက်စရာ ကြောက်နေတာလဲ။ အခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီတောင်ဖြစ်နေပြီ။ ၀န်ကြီးက ကြည့်ရတာ တရုတ်ကို ကြောက်နေပုံကြည့်ရရင် တရုတ်ဆီကနေ ဒေါ်လာတွေကို စားထား တယ် ထင်တယ်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 27, 2012 - 4:17 am အမှန်တရားတွေ ပြောလိုက်ကြတာ အာ လားလား အားလုံးမှန်တယ်။
Reply robert November 26, 2012 - 11:12 pm အေးဟေ့ ကြောက်တတ်ရင်ဘေးဖယ်နေ ငါတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့ ဗမာ ကွ ဗမာ ကိုယ်ထမင်းကိုစားတာ ဘယ်ကောင်မှကြောက်စရာမလိုဘူး ဆီပေးမှဆန်ရတာ သူများကျေးဇူးခံပြီးအချောင်စားနေတဲ့မင်းတို့လိုကောင်တွေဘဲကြောက်နေတာ ဘယ်ဟာမှပြတ်ပြတ်သားသားမရှိဘူး ငါတို့ပြည်သူတွေမကြောက်ဘူး သေရဲတယ် ခံရဲတယ် အငတ်ခံနိုင်တယ် တိုက်စ ရာလက်နက်မရှီရင် ၀ါးရင်းတူတ်နဲ့တိုက်မယ် ဦးဆောင်တဲ့လူကြီးဆိူတာ လုပ်ရဲရမယ် ခံရဲရမယ် အနစ်နာခံရဲရမယ် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့အပေါင်းအပါတွေအားလုံး ဟိုးအောက်ခြေအဆင့်ကနေယခု ၀န်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိ ပြည်သူတွေအပေါ်ဘာတွေအနစ်နာခံခဲ့ဘူးလည်း Reply burmathwe November 26, 2012 - 11:36 pm ဦးအောင်မင်း…သမတရုံးမှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်ရင်..အရည်ချင်းစစ်တဲ့ စာမေးပွဲ ပြန်ဖြေရမယ်။ဖြေရမယ့် စာမေးပွဲက…channal7 ကပြသနေတဲ့ ၅တန်းနဲ့ ပြိုင်ဘယ်သူနိုင် မှာ ၀င်ဖြေရမှာ..အဲ့ ဒီမှာ ကောင်းထက်ဇော်က မေးခွန်းမေးလိမ့် မယ်…မေးမယ့် မေးခွန်းက..လူဘ၀မှာ “အသက် နဲ့ အရှက်” ဘယ်ပာာအရေးကြီးဆုံးလဲ…….တစ်ကယ်လို့ မှားသွားခဲ့ မယ်ဆိုရင်…ပြောရမယ့် စကားတစ်ခွန်းက…ကျွန်တော် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းသည် ၅တန်းလောက်တောင် အတန်းပညာအရည်အချင်းမရှိဘဲ..ဗိုလ်ချုပ်နေရာ..၀န်ကြီးနေရာရယူပြီး တယုတ်ကြီးကိုညတိုင်းရှိခိုးအိပ်ပါသည်လို့ဖြေ၇မည်။နောက်တစ်ပတ် ဘယ်သူ့ အလှည်လဲဆိုတာ ထပ်မံဖော်ပြပါမည်။ channel7 ကိုကြည့် ရှုနေကြသောပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။အဖြေကို ဧရာဝတီ tv မှထုတ်လွှင်ပြသပါမည်။
Replyုkolattkklphado November 30, 2012 - 10:19 pm မင်းတိုကကောင်တွေက အမေရိကန်သမတလာတော့ အဖေလာတာကြနေတာပဲ -
Reply whoami November 26, 2012 - 11:43 pm အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သင့်သည်ဟု ပြောသည်။
Reply pps12345 November 27, 2012 - 9:34 pm whoami.
Reply ပါပါကြီး November 26, 2012 - 11:47 pm အပြုသဘောမြင်ကြည့်ရင် ၀န်ကြီးဆိုလိုချင်တာ Geopolitics အရကြောက်ရတယ်ဆိုတာထက်
Reply ဖုံးသိပေါ် November 27, 2012 - 4:36 am လက်ရှိအစိုးရရဲ့သဘောထားကို သိချင်ရင် သူတို့ပြောတာ နားထောင်ကြည့်ပါ။
Reply San Shwe November 27, 2012 - 9:51 am တရုတ်ကြီး နှင့်လည်း ရန်မဖြစ်ရဲဘူး ။
Reply Khin November 27, 2012 - 10:25 am Thwe Thwe Win from the village educated to general Aung Min at the meeting. She is calm and firm. We need more ladys like her.
Reply အောင်သူထက် November 27, 2012 - 10:45 amီဦးအောင်မင်းပြောတဲ့စကားက လက်ခံနိုင်စရာ လုံးဝမရှီပါဘူး ဘယ်သူကိုမှ ကြောက်နေစရာမလိုဘူး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာဘဲ
Reply သူရဇော်ဟိန်း November 27, 2012 - 8:07 pm နိုင်ငံတကာ စာချုပ်တွေကို ချုပ်ဆိုရာမှာ နားလည်ကြားဘူးထားသမျှတွေထဲက အချက်နှစ်ချက် အရတော့၊
Reply myetshu November 27, 2012 - 8:20 pm အောင်မင်းရေ ကြောက်နေရင် ဘုရင်နောင် အနော်ရထာတို့ ဦးအောင်ဇေယျ အရုပ်တွေဖျက်ပြစ်လိုက်တော။
Reply TomeCate November 27, 2012 - 10:14 pm ပြည်သူတွေက အကြောက်တရားကင်းအောင်ကျိုးစားနေကြရတဲ့အထဲ… ဒင်းကတမှောက်ဗျာ.. မပြောခြင်ဘူး သည် Link ကိုပဲ ဆက်ဖတ်ပေးတော်မူကြပါဗျို့
Reply ပေါက်အောင်ဖေါ် November 28, 2012 - 4:57 am မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်လိုက်လို့ တရုတ်ကို လျော်စရာ မလိုတာကို ဦးအောင်မင်း မသိတာလား ၊ မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလား။ မြစ်ဆုံကနေတူးယူသွားတဲ့ရွှေမှုန်တေပါတဲ့မြေတွေ၊ မြစ်ဆုံနဲ့ မေခ၊မလိခမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဆည်တွေကနေ နေ့တိုင်းရေထဲမျောပါလာတဲ့ရွှေတွေကိုကျင်ယူနေတာတွေ၊ဒါတွေနဲ့တင်တရုတ်ကအရင်းကျေနေပါပြီ။ ဒေသခံတွေ ပြောနေတဲ့ မြစ်ဆုံနားက တောင်လိုဏ်ခေါင်းထဲကစက်ရုံက ရေသန့်စင်တဲ့ စက်ရုံလို့ ပြောဦးမလို့လား။ တရုတ်တွေသနားပါတယ်လို့ ပြောမှာပါလား။
Reply Aung Thu November 29, 2012 - 1:19 am We should consider according to our Buddha Talk of Kalama Sutra. In Kalama Sutra, Gautama Buddha explained what is the truth, what is not truth and how to realize the truth. We can know the truth only on our knowledge. We must realize the results depending on previous experience _ how much we got help, how much we have to give. We try to know what about help?, what for help?. We should analyze on ground event. Try to know how much myanmar people feel . Check the agreement and then try to negotiate and repair. I know the leader is not to takeaposition. Leader is to take action, dare to action. We can acknowledge that person asagood leader.
Reply Shwebothar November 29, 2012 - 10:16 am U Aung Min is 50% Chinese blood,but it should not be race discrimination.
Reply ဂျောက်ဂျက် November 29, 2012 - 1:44 pm ငြိမ်းချမ်းရေး ၀န်ကြီးတော့ စာမေးပွဲ ကျပြန်ပြီ။ ၀န်ကြီးကို အကြံပေးချင်တာက နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပညာ နဲ့ ဆရာချစ်ဦးညို ဆီက ပောာပြောပွဲ ပညာ (၂)နှစ်လောက် သင်ပြီး မီဒီယာတွေနဲ့ စကားပြောသင့်တယ်။ တခြားနေရာက ၀န်ကြီးလည်း သင်ခန်းစာယူပြီး ကျောင်းတက်သင့်တာတွေ၊ ကျူရှင်တက်တာတွေ လုပ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်အောင် ကြိုးစားကျပော့။ မဟုတ်ရင် သိက္ခာကျလွန်းတယ်။
Reply aphyulay November 30, 2012 - 11:52 am U Aung Min is right because KIA is supported by China.China equipped arms KIA
Reply bota November 30, 2012 - 7:16 pmံHow is Myanmar army??? Isn’t the same????
Reply james November 30, 2012 - 4:45 pm တကယ်တော့ ဦးအောင်မင်းက နိုင်ငံရေးသမားမှ မဟုတ်တာ ၊ သနားပါတယ်
Reply problem November 30, 2012 - 4:50 pm သွားမပြောနဲ့ နော်၊ လုပ်သက်နု ၀န်ကြီးများကို
Replyုkolattkklphado November 30, 2012 - 10:15 pm ဦးအောင်မင်း ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ပါဘူး၊သူကစေတနာနဲ့ ပြည်သူဆန်ဆန်ပြောတာပါ